बन्यो नयाँ इतिहास ! को बन्छ करोडपतिमा राजीव जैनले जिते एक करोड (हेर्नुस भिडियो) – Nepal Trending
बन्यो नयाँ इतिहास ! को बन्छ करोडपतिमा राजीव जैनले जिते एक करोड (हेर्नुस भिडियो)
On २९ बैशाख २०७६, आईतवार २३:१२
काठमाडौं : कौन बनेगा करोडपतिको नेपाली संस्करण को बन्छ करोडपतिमा राजीव जैनले एक करोड जितेका छन् । कीर्तिमान कायम गर्दै विराटनगरका जैनले कार्यक्रममा सोधिएको १५ वटै प्रश्नको सही जवाफ दिँदै एक करोड जितेका हुन् ।
शनिबारको एपिसोडमा उनले निरन्तर १३ प्रश्नको सही जवाफ दिँदै २५ लाख जित्दा निर्धारित समय सकिएको थियो । त्यसपछि आइतबार बाँकी २ वटा प्रश्नको पनि सही उत्तर दिए । अहिलेसम्म यो संस्करणको कार्यक्रममा यति धेरै प्रश्नको उत्तर मिलाउएर जैनले कीर्तिमान कायम गरेकाे कार्यक्रम होस्ट महानायक राजेश हमालले जानकारी दिए ।
१५ औं प्रश्नको रुपमा महानायक हमालले जैनलाई ‘२००७ सालको प्रजातन्त्रपछिको पहिलो ऐतिहासिक चुनाव कहिले घोषणा गरिएको थियो ?’ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए त्यसमा जैनले ‘वि.सं २०१४ माघ १९ गते’ भन्ने उत्तर दिएर एक करोड जिते । एक करोड जितेका जैनले सो पैसाले विश्व भ्रमण गर्नुका साथै समाजसेवामा खर्चिने बताएका छन् । हेर्नुस भिडियो
यी नेपाली चेलि मिस इग्ल्याण्डको फाइनलमा , के बन्छिन् त मिस ब्रिटेन ? ( हेर्नुस…
छवि र शिल्पालाई ५ वर्ष जेल ? जेठी श्रीमतीको प्रहरीमा बहुविवाहको उजुरी ( भिडियो…
के यीनै हुन् श्रृङ्खला खतिवडाका प्रेमि ? तस्बिर भयो भाईरल
प्रियंका र सृष्टीको यस्तो चुम्बन देखेर फ्यानले टोके जिब्रो ( हेर्नुस भिडियो )
प्रेमीसँग समुन्द्र बिचमा चुम्बन गर्दै नायिका साम्राज्ञी, कसरी बाहिरिए यस्तो फोटो ? (…
प्रेमिसँग साम्राज्ञीको यस्तो फोटो सार्वजनिक भएपछि फ्यानको उड्यो होस् ( हेर्नुस बोल्ड…